[84% ISELULEKO] Amakhuphoni ase-Canadian Tyre & Amakhodi evawusha
Canadian Tire Amakhodi amakhuphoni
I-Curbside Pickup yamahhala Thola amakhodi wokukhushulwa wakamuva waseCanada waseCanada angama-40, amakhuphoni, izaphulelo ngo-Agasti 2021. Thola isigqebhezana esingu-35% seCanadiantire.ca.
Yonga Ku-50% Ekucacisweni ICanada Tire izophinde inikeze ngamanani entengo aphambili kokunye okubalulekile okufana nemishini emincane, izinto zikagesi, ukuhlobisa, okokugqoka nokunye okuningi. Bheka amakhuphoni anamuhla aphezulu eCanadia Tire bese ulondoloza kumikhiqizo ephuma kumikhiqizo ephezulu efana ne-Mastercraft, i-CANVAS, iPaderno, i-Fan Zone, i-NOMA, nokuningi.
Gcina Kuze Ku-75% Kumadili Oshisayo ICanada Tire ithengisa amakhadi ezipho kumahlelo angama- $ 10, $ 25, $ 50 kanye nama- $ 100 kuwebhusayithi yabo. Amakhadi esipho angahlengwa ezitolo ezingaphezu kuka-500, ezikhungweni ezihlinzeka ngezimoto ezingama-490, nasezindaweni ezingama-300 zaseCanada Gas Gas + ezweni lonke. Ngingasithola kanjani isephulelo eCanada Tire?
$ 25 Canadian Money Money & Free Frank Gift Box Lapho Ufaka isicelo se-Triangle Card Card ICanada Tire yinethiwekhi ekhulayo yamabhizinisi ahambisanayo asebenza ngokuthengisa, izinsizakalo zezezimali kanye negesi. ICanada Tire yikhaya lazo zonke izinto zansuku zonke ezingakusiza ukuthi usebenze, udlale, futhi uphile kangcono. Izipesheli zanamuhla zeTirean zaseCanada: